वर्क फ्रम होम र अनलाइन क्लासले आँखाको समस्या बढाउँदै, कसरी बच्ने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
वर्क फ्रम होम र अनलाइन क्लासले आँखाको समस्या बढाउँदै, कसरी बच्ने?
कमला गुरुङ शनिबार, फागुन ८, २०७७, १२:५०:००
काठमाडौं - कोभिड महामारीपछि मानिसहरुको काम गर्ने शैली र अध्ययन गर्ने तरिकामा परिवर्तन आएको छ। महामारीको समयमा अधिकांशले घरबाटै अर्थात् ‘वर्क फ्र होम’को शैली अपनाए। विद्यार्थीहरुको अध्ययन पनि अनलाइन क्लासबाटै हुन थाल्यो।
यति मात्र होइन, अधिकांश समय हामी मोबाइलमै बिताउने गर्छौँ। वर्क फ्रम होम र अनलाइन क्लासले काम र अध्ययनलाई केही सहज बनाएपनि आँखाको स्वास्थ्यलाई भने असर गरेको छ।
लगातार कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल लगायत उपकरण चलाउँदा आँखामा असर पुग्ने दृष्टि विशेषज्ञ डा दिपक कुमार साह बताउँछन्। यी उपकरणको लगातार प्रयोगले आँखामा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उनले बताए।
यी उपकरणको प्रयोगले आँखा किन र कसरी असर गर्छ? के के असर गर्छ? कसरी बच्ने लगायत विषयमा दृष्टि विशेषज्ञ डा साहसँग स्वास्थ्यखबरले भिडियो कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानीः
कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल लगायतका उपकरणले आँखामा के–कस्तो असर गर्छ ?
– कम्प्युटर, मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका उपकरणकले आँखामा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर गर्छ।
– तत्कालीन असरहरु – आँखा पोल्ने, बिझाउने, टाउको दुख्ने, आँखाबाट आँसु आउने, आँखा रमरम हुने लगायत समस्या हुन्छ।
– दीर्घकालीन असरहरु – आँखाको पावर कम हुँदै जाने, आँखा एकदम सुख्खा हुने, आँखाको नानी तथा रेटिनामा असर।
यी उपकरणहरुले आँखामा किन र कसरी असर गर्छ ?
– लगातार कम्प्युटर तथा मोबाइल चलाउँदा आँखालाई बल पर्छ।
– लगातार एकोहोरो रुपमा कम्प्युटर तथा मोबाइल चलाउँदा आँखामा भएको आँसुको तह उडेर जान्छ।
– आँखामा भएको आँसुको तह उडेर गएपछि आँखाको नानीमा असर पुग्छ।
– आँखाबाट आँसु बगिरहनु सामान्य होइन। समस्या हुन सक्छ।
अहिले यी उपकरणहरु अत्यावश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यी उपकरणको प्रयोगसँगै आँखाको स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिन सकिन्छ?
– आँखाको सरसफाईमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
– करिब ९० प्रतिशत मानिसमा आँखाको सही तरिकाले सफा गर्न आउँदैन।
– आँखा पानी डुबाउने वा आँखा पानीले पखाल्ने दुवै सफा गर्ने गलत तरिका हुन्।
– आँखाको वरिपरि मात्र सफा गर्नुपर्छ। आँखाको सफाई आँखा आफैंले गर्ने गर्छ।
– सही तरिकाले आँखा धुने तरिका अपनाए मात्र आँखा बिझाउने र पोल्ने जस्ता समस्या हटेर जान्छ।
– आँखाको स्वास्थ्यका लागि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ।
– ल्याब तथा कम्प्युटर १ सय १५ डिग्रिको एंगलमा चलाउनुपर्छ।
– कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल चलाउँदा समय समयमा बेस्सरी आँखा झिमकाउनुपर्छ।
– २० मिनेटसम्म लगायतार यी उपकरण चलाएको छ भने २० सेकेण्डसम्म टाढा हेर्ने र २० सेकेण्ड आँखा बन्द गर्ने।
– आँखालाई धेरै बल तथा तनाव दिनु हुँदैन।
– अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई ग्याजेट्सहरुमा धेरै गेम खेल्न दिनुहुँदैन।
– तातो आलु, तातो अण्डा सफा कपडामा बेरेर बिहान बेलुका केही समय सेक्नु पर्छ। १० देखि दुई हप्तासम्म यसरी आँखा सेक्न सके धेरै राहत मिल्छ।
कुन अवस्थामा मानिसहरु चिकित्सकको परामर्शमा जान आवश्यक छ ?
– आँखाको अवस्था थाहा पाउन ६/६ महिनामा परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
– कुनै बेला हेर्दा समस्या नदेखिएपनि आँखामा समस्या हुन सक्छ।
– समयमै आँखाको परीक्षण गराए भविष्यमा निम्तने समस्याबाट बच्न सकिन्छ।